Mawduuca - Bogga 3 - Geofumadas
Muuqaalka. khariidado ballaadhan
Mawduuca Koorsada Shaxda
Saddex maalmood oo shaqo ka dib, halkan waxaan sii daayaa sawirro badan oo ka mid ah koorsada topoortiga oo leh Istuudiye Station. Sida Aristotle sheegay, ninka caqliga leh marnaba ma sheegayo wax kasta oo uu ka fikiro, laakiin marwalba wuu ka fekeraa wax walba oo uu sheego ... Waxaan qaadanay daqiiqado 45 oo ka fakaraya sidii loo waydiin lahaa su'aal ku saabsan isticmaalka xisaabiyaha sayniska. "Xaqiijinta ...
Leisure / waxyi, topografia
Koorsada shaxanka oo leh saldhigga guud
Just maanta billaabeynaa kooras ah leh taas oo aanu rajaynaynaa in la keeno degmo cadastre farsamo iyo ururada si ay u kaabaan tababarka, taas oo ilaa hadda sababo mudnaanta lahaa oo keliya cadastral. Ujeeddadu waa in ay bixiyaan adeegyo aad u hesho macluumaadka lagama maarmaanka u ah la dhigaayo ...
AutoCAD-AutoDesk, GPS / Qalabka, topografia
Talooyin dheeraad ah AutoCAD Map, Civil iyo Land Desktop 3D
Cadapult ayaa dhawaan ku dhawaaqay in la sii daayo oo ay edition cusub: Qoditaanka sii mool dheer lagu pages AutoCAD Civil 3D 2011 416 7 abaabulay cutubyada iyo CD ah oo ay ku jiraan jimicsi horumariyo qayb kasta, hoos imaanaya hoggaanka Rick Ellis. Dhab ahaantii waxaa dheer weyn loogu talogalay qof kasta oo raba in uu si fiican u bartaan 3D Civil iyo in la kordhiyo ...
Map-ka AutoCAD 3D
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, topografia
Abuuri mashaariicda Caalamka
Global Mapper waa mid ka mid ah barnaamijyada dhif ah in ay ka qiimo aad u yar in ay piratearlos oo sabab in inta badan lama dareemo. Waxaan doonayaa inaan ku sameeyo layliga iyo waxaan hor u sameeyeen barnaamijyo kale: Iyada oo Bentley Site ... waw anna waxaan soo qaaday halka a, sababtoo ah ma jirto umeerin AutoCAD ...
Videos More for Civil 3D, AutoCAD iyo Revit Map
... ugu fiican, ka dib markii AUGI MexCA ahaayeen in dayactirka ... waqti Qaar ka hor waxaan sameeyey dib u eegidda AUGI in ay cutubka kulaylaha, xaddiga qiimo leh ilaha dhaqaale ee dadka isticmaala AutoCAD Civil3D teknoolajiyada iyo Map. Nasiib darro bogga ayaa dayactir ka badan sanad ka hor, cusbooneysi aan sugeyno ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering, topografia
Soo qaado sawirrada iyo qaabka 3D ee Google Earth
Microstation, laga bilaabo 8.9 version (XM) wuxuu keenaa hawlo taxane ah si loola xiriiro Google Earth. Xaaladdan waxaan rabaa in aan tixraaco soo dejinta qaabka saddexda-cabbir iyo muuqaalkiisa, wax la mid ah waxa AutoCAD Meelaha 3D sameeyo. Hawlahaasi waxay u hawlgalaan iyagoo sameynaya: Qalabka> juqraafi ah ama haddii kareemka Microstation ...
XYZtoCAD, iskuduwaha shaqada ee AutoCAD
AutoCAD keli ah ma keeneyso waxyaabo badan oo ka shaqeynaya isku-duwayaasha ama abuurista jadwalka dhibcooyinka. 3D miyay samaysaa, laakiin qaybta aasaasiga ahi maaha, sidaas darteed marka aynu u shaqeyneyno isku-duwo ay soo saaraan saldhigga guud, GPS ama daneeyayaasha, waa inaanu ku nasteexo macruufin halkaas ka jira ...
AutoCAD-AutoDesk, topografia, Video
mashaariicda Course la AutoCAD Civil 3D 2011
Mashruucyada injineernimada, oo ku lug leh horumarinta horumarinta, wadooyinka, topoollada iyo shabakadaha tuubbooyinka AutoCAD Civil 3D 2011 wali waa qalab qiimo leh. Ka dib kobcinta oo ku dhacaya barnaamijkan, ee version 2011 waxaa lagu arki karaa badanaa qaan-gaar ah ee dadka isticmaala in lagu isticmaalo interface cusub in yar ka dib ...
Facebook: videos for kormeerayaal xagga dhulka ah
By farqiga iyo xuduudaha Facebook wuxuu noqonayaa aalad caadi ah ujeedooyinka ganacsiga iyo waxbarashada. Inaad noqoto "Internetka dadweynaha" shirkadaha ayaa u soo jeestay aragtidooda dadka ku duuduubaya dadka kale, taas oo ka dhigtay qiime ka baxsan shabakadda bulshada ee caadiga ah. Mid ka mid ah sifooyinka ugu fiican waa ...
Hagaha isticmaalka GPS iyo saldhigga guud ee Leica
Ka dib markii link ka liistada boosta gvSIG, oo maanta si rasmi ah version finalka 1.10, waxaan helay goobta xiiso leh. Waa Openarcheology.net, oo kala eryay by Oxford Qadiimiga doonayaa inuu horumariyo isticmaalka qalab lacag la'aan ah iyo nidaamyada sahan codsiyada mashaariicda qaddiimiga ah. Goobta, ee ugu ...
Downloads, GPS / Qalabka, GvSIG, topografia
Tani waa magaca majaladda dijitalka ah oo ay daabaceen shirkadaha wakiilada ee gobolka Yurub ee Sokkia iyo Topcom, oo ku salaysan Netherlands. Published in Dutch oo isku mar, dhigyo "magazine for qaabkaaga xirfadeed" ee ay ka kooban tahay ka baxsan saarney a alaabta fudud muuqaalka guud ee dhulka ...
GPS / Qalabka, tabo cusub, topografia
Gaadiidka 3 GPS, aragti hore
Waxaan horeyba uga saaray alaabta lagu ciyaaro sanduuqyada, toddobaadkii waxaan sameyn doonnaa tababar si aan u aragno sida ay u shaqeeyaan. Hadda, si dhib yar ayaan u arkay fiidiyowyada iyo qaar ka mid ah sifooyinkooda. Aabayaasha of Promtarka 3. In line line this, hore u jiray waxaa jiray iyo waxaa jira ugu dambeeya: Mobile Mapper Pro, qurux wanaagsan oo ku wareegsan ...
GPS / Qalabka, topografia
Tijaabinta Goobta Wadarta Sokkia SET 630RK
Waxaan billaabay inaan arko qaabkan, dhamaadka bisha waxaan rajeynayaa inaan sameeyo tababar rasmi ah si ay farsamoyaqaanadu u noqdaan kuwa aqbaarta ah. Ilaa hadda waxaan isticmaalnay Set520K, oo aan horey u hadalnay. Waxaan ku siin doonaa aqoon-is-weydaarsi dhammaadka May ee 2010, ha ahaato Honduras ama El Salvador. Haddii ...
GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay, topografia
PowerCivil loogu talagalay Latin America, aragti hore
Waxaan horay u soo dejiyey qalabkan, kaas oo aan shalay idiin sheegi jiray, waxaan ka hadlayaa V8i 8.11.06.27 version. Laga soo bilaabo gelitaanka guddi ayaa kor loo qaadayaa halkaasoo dhammaan waxqabadyada ay ku badan yihiin. Qeybta hoose waa tabs: Goobaha Joomatarka Diyaargarowga Dareeraha Dhuumaha Dhulxinta Hababka Hababka Habka Shaqada Inkastoo ay kuwani yihiin, waxay yihiin ...
AutoCAD-AutoDesk, Engineering, Microstation-Bentley, topografia
Halka Bentley uu la socdo aagga Rayidka
Tag mawduuca waa mid aad u jilicsan, waxaanan rabaa inaan ka fikiro waxa aan fahmi karo. Waxaan bilaabay inaan isku dayo inaan ka hadlo Geopak, laakiin hadda hadda PowerCivil ayaa imaatay, waxay ii badbaadineysaa adduunka, waa inaan imtixaan u qaadaa haddii wax kasta oo ay sheegto ay run tahay. Bentley ka hor ... Haddii ay jirto ...
Engineering, Microstation-Bentley, topografia
GPS Mobile Mapper 6, xogta dhoofinta ka dib
Dhowr maalmood ka hor waxaan arkeynay sida loo hayo xogta Mashiinka Mobile Mobile 6, hadda waxaan isku dayeynaa in aan isku dayno ka dib. Tani waxaa looga baahan yahay inay ku rakibtay Xafiiska Khariidadda Mobile Mobile, kiiskan waxaan isticmaalayaa 2.0 version kaas oo ka yimid iibsashada qalabka. Isticmaal xogta Habka ugu waxtar leh ee tani waa in la isticmaalo ...
cadastre, GPS / Qalabka, topografia
GPS Mobile Mapper 6, xogta la qabsado
Khariidadda Mobile 6 waa jiilka u yimid inuu bedelo CX iyo Pro, oo hore u soo saartay Magellan. Maanta waxaan arki doonaa sida loo hayo xogta berrinka. 1 Qaababka aasaasiga ah Si loo qabto xogta, kooxdu waa inay ku rakibtay barnaamijka Mapping Mobile Mapping, taas oo la timaada qalabka marka la iibsanayo qalabka iyo ...
Contours ka polylines (Step 2)
In post post hore waxaan ku wareegay image ah oo ay ku jiraan wareegyada, hadda waxaan rabnaa in ay u beddelaan wareegyada 3D Civil. Tirinta curiska Taas waxaa ku jira barnaamijyo ku dhowaad gawaarida geedi socodka, sida AutoDesk Raster Design, u dhigma daaqada Bentley ama ArcScan ESRI. Xaaladdan oo kale ayaan ku socdaa cagaha, ...
AutoDesk Bentley Systems 3D ESRI Google Earth
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 7 page Next